Is-Stacking muquuninta Qaboojiyeyaasha lagu soo dhex keenay daruuraha COVID-19-NEWS-Square Technology Group Co., Ltd.
Is-isdabamarin Qaboojiyeyaal Qaboojiyeyaal ah oo lagu dhex bixiyo daruuraha COVID-19
on 15th Bishii Juun 2020, oo ay la socdeen gaari xamuulkii ugu dambeeyay ee ka soo raray bakhaarkiisa, Square Technology waxay si guul leh u gaarsiiyeen labadii ugu horreysay ee wadarta 4 qaboojiyeyaasha is-dul-dhigay Dachan Food (Taiwan). Labada hartay ee qaboojiyeyaasha is-dul-dhigay ayaa loo qorsheeyay in la keeno labada toddobaad ee soo socda. Qaboojiyeyaasha is-isku-dhejiska ah ayaa lagu keenaa jadwalka iyada oo aan saameyn ku yeelan COVID-19, taas oo ay ugu mahadcelinayaan shaqaalaha Teknolojiyada Square iyo dadaalka dadaalka badan ee injineerada.
Qaboojiyeyaasha muquuninta is-dhajinta ee Teknolojiyada 'Square Technology' ma aha oo kaliya inay si wanaagsan u aqbalaan macaamiisha Shiinaha, laakiin sidoo kale waxay caan ku yihiin macaamiisha dibedda. 2018-2019, qaboojiyeyaal badan oo iskood isu-dhajinaya ayaa la rakibay oo si buuxda uga hawlgalaya saddex warshadood oo kala duwan oo wax soo saar ah oo ka tirsan CP Foods Group oo ku taal Thailand, oo ah processor-ka ugu weyn ee digaagga ee Aasiya. Cuntooyinka CP aad ayey ugu qanacsanyihiin tayada qalabka oo ay kujiraan nadaafada, isku halaynta, dayactirka fudud, isticmaalka HMI saaxiibtinimo iyo taageerada farsamada waqtiga.
Ilaa maantadan la joogo, Teknolojiyada laba jibaaran waxay soo bandhigtay in ka badan 40 qaboojiyeyaal is-dulsaaraya, kuwaas oo si ballaaran loogu adeegsado warshado kala duwan, gaar ahaan digaagga, hilibka, cuntada diyaarka ah, iwm.
Inbadan oo ku saabsan Dachan Group:
Markii uu Ho-jan Han aasaasay Tai-Dong Mills, oo ah processor-yar oo saliid soybean ah iyo keega, 1957, wuxuu dajiyay aragti sii wadaysa inuu wado Tai-Dong dhaxalka casriga ah - DaChan Great Wall Group.
In ka badan nus qarni, Kooxda DaChan Great Wall waxay ku raadjoogtay aragtideeda horudhaca daacadnimo iyo khushuuc. Kooxdu waxay ku shaqeysaa nidaamyo isku dhafan oo digaag ah ,lakabka,doofaar,iyo biyo-dhaqashada oo si buuxda u xakameysa taranka, faafinta, soo-saarka quudinta, gawraca, iyo howsha u dambeysa. Kooxda ayaa sidoo kale sii kordhineysa unugyadeeda ganacsiga saliida iyo daqiiqda waxayna si isdaba joog ah ugu sii fideysaa qeybta F&B iyo maareynta dhabta ah. Maanta, DaChan Great Wall Group waxay ka shaqeeyaan lix koox ganacsi, oo ay ku jiraan Feed & Flour Business Group, Agri-Meat & Egg Business Group, Processed Food Business Group, Foodservice Business Group, Southeast Asia Business Group, iyo East Asia Business Group.
Iyadoo la raacayo ujeeddooyinka istiraatiijiyadeed ee goboleed, DaChan waxay ka shaqeysaa in ka badan 100 shirkadood oo ku baahsan suuqyadeeda waaweyn ee Taiwan, Shiinaha, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar iyo Cambodia.